Tag: doka fijanonana bus | Martech Zone
Tag: doka fijanonana bus
Matetika tsy jerentsika ireo fotoana mety hivarotana izay hita be loatra ka tsy mandeha iray andro isika raha tsy mahita azy ireo. Ny marketing ivelany amin'ny takelaka fanaovana bileta dia iray amin'ireo paikady ireo. Toy ny ankamaroan'ny fantsom-barotra, misy tetika manokana sy fotoana mety amin'ny marketing amin'ny takelaka izay tsy azon'ny hafa omena. Ary nanome tetika lehibe, ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola dia mety hihoatra ny fantsom-barotra hafa. Ny takelaka takelaka dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny orinasa amin'ny indostria rehetra. Amin'ity sary ity avy amin'i Signarama